မျှတသောဥပဒေဆိုတာ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မျှတသောဥပဒေဆိုတာ….
Posted by johnnydeer on Mar 10, 2013 in Buddhism |5comments
ဒါကတော့ အကြံပေးတာသက်သက်ပါ….အခုတလော ဖြစ်နေတဲ့ ပြသ၁နာ အချို့ကို ပြေလည်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပါ….
လုပ်ရမှာက လွှတ်တော်မှာ စည်ပင်သာယာ အက်ဥပဒေ အသစ်တင်လိုက်ကြပါ…မည်သည့် ဆိုင်းပုဒ်မဆို သက်ဆိုင်ရာ လိုဂို တံဆိပ်မဖြစ်မနေထည့်ရမယ့် သဘောမျိုးပါ…ဗုဒ္ဒဘာသာဆို အရဟံလိုဖြစ်ဖြစ်…၉၆၉ ပဲဖြစ်ဖြစ်…မွတ်စလင်ဆိုင်ဆို ၇၈၆ အမှတ်အသားလိုဟာမျိုး…ခရစ်ယာန်ဆိုင်ဆို လက်ဝါးကပ်တိုင်လိုမျိုး…ဟိန္ဒူဆိုလဲ သူ့သက်ဆိုင်ရာ သင်္ကေတပေါ့…ကျန်တဲ့ ဘာသာတွေဆိုလဲ သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အမှတ်အသားတွေ မဖြစ်မနေထည့်ခိုင်းလိုက်ပါ…ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူပိုင်…ဘယ်သူ့ဆိုင်…နောက်ပြီး ဘာဆိုင်ဆိုတာ တန်းပြီး သိနိုင်အောင်လို့ပါ….အားပေးချင်တဲ့သူတွေလဲ အားပေးချင်တာ အားပေးပါစေ…
တူညီတဲ့ ဥပဒေအောက်မှာ နိုင်ငံသားတိုင်း…ဘာသာစုံကိုးကွယ်တဲ့ သူတိုင်း တတန်းထဲ ထားလိုက်ပါ…ဒီလိုတူညီတဲ့ ဥပဒေကို လူတိုင်းအတွက် ချပေးထားပါရက်ကယ်နဲ့ မနေနိုင်..မလုပ်နိုင်ရင်တော့ရှယ်သာတွယ်လိုက်ပေတော့…
ဒါကိုမှ မကျေနပ်လို့ ကွန့်လာ….ညွန့်လာလို့ကတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်…မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်…ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်…ဘာ ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ ထောက်မနေနဲ့….
အရာရာကို မျှမျှတတသာ ချပြပေးလိုက်ပါ…နေနိုင်တဲ့သူကတော့ လူကောင်းတွေပေါ့…မနေနိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့ သူကတော့ လူယုတ်မာတွေပေါ့…မလုပ်နိုင်တဲ့သူ…မလိုက်နာနိုင်တဲ့ သူဆိုလို့ကတော့ ဘယ်လိုတွယ်မယ်ဆိုတာကော ဥပဒေထဲ ထည့်ပြပေးလိုက်ပါ…တခါတလေကျတော့လဲ ရောဂါဆိုတာ ဆေးခါးကြီးတိုက်သင့်ရင်လဲ တိုက်ရမှာပါ…ခွဲထုတ်သင့်ရင်လဲ ခွဲထုတ်ရမှာပါ…
(မျှတသော ဥပဒေဆိုတာ မိုက်ရိုင်းသော သူတွေအတွက် တကယ့်ဆေးခါးကြီးဖြစ်ပေမယ့် လူယဉ်ကျေးတွေအတွက်တော့ နတ်သုဒ္ဒါလို ချိုမြိန်တဲ့ စကားတခွန်းပါ)
မလုပ်ပါနဲ့တော့ ဥပဒေ ရယ် ….
အဲ့ဂလို မျိုး တွေ တပ် ရမဟဲ့ ဆိုရင် နဂိုကမှ မစည်းလုံးတဲ့ မြန်မာပြည်သူားတွေ … ပိုလို နောင်ဂျိန်ချကြတော့ မပေါ့ ။
တော်ကြာနေ တော့မှ အိုးစည်၊ ဖားစည်၊ မနောတိုင် ၊ အောက်ချင်းငှက်တွေ ပါ ထပ်တိုး နေကြပါဦးမယ် ။။
ဆိုင်းဘုတ်တွေက စီးပွားရေး နဲ့ပတ်သက်တာများပါတယ်။
မြန်မာပြည်ထဲ.. “ခွဲခြားနှိမ့်ချမှုနှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေ”ပြဌာန်းဖို့.. အရေးတကြီးလိုနေပြီထင်မိတယ်…။
တိုင်းရင်းသားများနဲ့.. ပြည်ထောင်စုလိုတိုင်းပြည်က ပိုလို့လိုပါတယ်..
Anti-discrimination law – Wikipedia, the free encyclopedia
Anti-discrimination law refers to the law on the right of people to be treated equally. Some countries mandate that in employment, in consumer transactions and .
၇၈၆ နဲ့ ၉၆၉ အတွက်တော့ ဥပဒေ ထုတ်စရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာအယူအဆက အဲဒီ နှစ်မျိုးဘဲရှိတာမဟုတ်လို့ရယ် ပြီးတော့ အဲဒီ ဆိုင်းဘုတ်တွေက ဘာသာရေးထက် စီးပွားရေးနဲ့ နွယ်တာများလို့ရယ်ပါ။
၉၆၉ ကိစ္စကတော့ ဂဇက်မှာ မရေးလောက်ကြဖူးလို့ ထင်နေတာ….
အရင်တုန်းက လည်း ဗုဒ္ဒ ဘာသာဆို (အရဟံ ဒါမှမဟုတ် ၂၄ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် ဘုရားတဆူဆူပုံ) မွတ်ဆိုလည်း (၇၈၆ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကျမ်းစာတွေ ဒါမှမဟုတ် ဗလီပုံ) ခရစ်ယာန်ဆိုလည်း (လက်ဝါးကပ်တိုင်လေးနဲ့ဒါမှမဟုတ် မယ်တော်ပုံ ဖြစ်ဖြစ် ယေရှူပုံဖြစ်ဖြစ်) ဟိန္ဒူဆိုလည်း တခုခုပေါ့ (ကြည့်ရင်တော့ သိတယ် မပြောတက်ဖူးကွယ်)
အဲ့လိုမျိုး အစကတည်းက ရှိပီးသားပါ…………
ဆိုတော့ကား အခုမှ ၉၆၉ ဆိုပီး မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့ ဟုတ်ချေဖူးနော်…..
ဆိုင်အသေးလေးတွေကထားပါတော့ များသောအားဖြင့် တဦးပိုင်ဆိုတော့……
အများပိုင် တွေကျတော့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်…. မွတ်ပိုင်တာများရင် တံဆိပ်တမျိုးကပ်….
ဗုဒ္ဒဘာသာပိုင်တာများရင် တံဆိပ်တမျိုးကပ်…. အဲ့လိုလုပ်ကြမလား…….
အမိ ဘာသာ သာသနာ လူမျိုး မပျောက်အောင် ကြိုးပမ်းမှူမျိုးကို တော့ ချီးကျူးပါတယ်….
ဒါပေမဲ့ လမ်းလွဲများလိုက်နေကြသလားလို့ …………..
တော်သေးဘီ (ခရက်ဒစ်တူ အဘဖော)